Sida ay u shaqeeyaan naadiyada Finland - seuraohjelma.fi
Shaqada kooxaha Finland waa hab ama nidaam wada shaqayneed oo ka wada duulaya sharci qudha. Naadigu wuxuu u diyaariyaa shaqada xubnaha ka tirsan, markaa carruurtaadu waa xubin ka mid ah. Waad ka mid noqon kartaa xubin adiga oo bixinaya lacagta ka mid noqoshada xubinnimada. Xubnuhu waxay xaq u leeyhiin inay ka qaybgalaan shirsannadeedka kooxda. Shir sannadeedka waxaa lagu go’aamiya Kooxda cida hogaamin doonta, miisaaniyada, dhaqaalaha iyo lacagta xubinnimadu intay ay noqon karto.
Kooxda arrimaheeda waxaa si toos ah u go’aamiya Hogaamiyaha kooxda. Kooxda cida hogaaminaysa waxaa lagu falanqeeyaa shirka waalidiinta. Waalidiinta ayaa iska dhex doorta hogaamiyaha kooxda, lacag hayaha, iyo caawiyaha kooxda iyo cidii kale ee loo baahdo. Tababaruhu wuxuu noqon karaa mid naadigu soo magacaabo ama mid ay waalidiintu iyagu soo doortaan.
Marka ilmahaagu ku soo biro kooxda wuxuu xaq u leeyahay inuu metelo kooxdiisa. Marka uu ilmahaagu ka baxo kooxdiisii hore ee uu koox kale u wareegayo, wuxuu kooxdiisa ka qaadanayaa shahaadadii uu ugu wareegayay kooxda cusub. Waalidku waa inuu u tagaa kooxdii hore ee ilmahiisu u ciyaari jiray si uu ugu qaado shahaada ama warqada wareejinta waa la siinayaa, waayo waxaa ku cad lacagtii uu bixin jiray iyo sida loo maamulay.
Tababarka kooxdu wuxuu mar kasta ka dhacaa meel naadigu diyaarsaday ama kiraystay. Kooxda iyo xubnaha naadiga waxaa waajib ku ah inay daryeelaan oo ay nadaafada meesha dhawraan, sida garoonka, meesha dharka lagu xidho waa inaan qashin ama xashiish lagu tuurin. Haddii aad ka maqnaanayso tababarka ama ciyaarta si dhakhso ah ula soo xidhiidh tababaraha. Tababaraha ayaa hagaya ama hogaaminaya ciyaaraha iyo tababarada. Marka kooxdu garoon tababar ku leedahay looma baahana in ciyaartoy kale oo aan tababaraha fasax ka haysanin inuu ku ciyaaro garoonkaas. Waa in sidaa loo fahmaa. Inta badan garoonadu galabtii way wada buuxaan oo way kiraysan yihiin.
Naadiga iyo kooxaha lacagaha ay helaan
Lacagta ciyaartoyga laga qaado
Lacagta bisha ama kooxda ee ciyaaryahanka laga qaado
Lacag ay iskood u ururiyaan
Lacagtaasi halka ay ku baxdo
Kubado loogu iibiyo kooxda
Arrimaha xafiiska sida: daabacaada, telefoonada, xisaabinta
Ka qaybgalka ciyaarha
Shaadhka ama dirayska ciyaartoyga
Ciyaaraha waaweyn ka qaybgalkooda
Gargaarka degdeg ah
Iyo wixii kale ee loo baahan yahay
Qaybta la doonayo inay waalidku ka qaataan naadiga ama kooxda
Waxaa wanaagsan inay waalidiintu ka qayb qaataan wada shaqaynta kooxda, waana loo baahan yahay. Hadii aad ka soo qaybgasho waxqabadka kooxda, waxaad ogaanaysaa ama la soconaysaa halka wax marayaan.
Shirka waalidiinta iyo kooxda markasta waxaa lagu go’aansada sida kooxda wax loogu qabanayo, isla markaana waxaa laga wada hadla sidiii wax laysugu ogaan lahaa.
Shirka waalidiinta iyo kooxdu waa muhiim in laga soo qaybgalo. Sannadkii waxyaabo badan baa soo kordha, sidaa darteed waa muhiim in waalidku yimaado tababarada ama ciyaraha marka ay socdaan, si uu war ku filan u helo.
Wakhtigan xaadirka ah fariimaha waxa la isugu diraa Komputerka, markaa haddii aanu reerku komputer
lahayn, ama aanay fariintu gaadhin waalidka, si toos ah u tag garoonka, waydiiso tababaraha wixii su’aal ah. Runtii way kuu sheegi doonaan wixii fariin ah ee ay kuu hayaan. Ama waxaad waydiisan kartaa fariinta oo warqad ku qoran, si aad qof kaa caawiya ugu la tagtid.
Shaqada kooxdu waxay salka ku haysaa is xilqaamis. Kooxdu lacagta ay ku shaqaysa waalidiinta ayaa iska soo ururisa, sida iyaga oo meel nadiifiya ama alaabo yar yar iibiya, lacagta ka soo baxdana ugu deeq kooxda. Sidaa darteed waad la shaqayn karta si aad isu barataan waalidiinta kale.
Dhaqangelinta nidaamka ciyaarta
Qofkasta oo ka mid noqonaya kooxda waa inuu dhaqangeliyaa nidaamka ciyaarta looga baahan yahay. Ka wada hadalka nidaamka ciyaartu wuxuu ku salaysan yahay korinta iyo kobcinta ciyaartooyga. Wixii lagu wada heeshiiyo waxaa lagu soo qorayaa websidtka (www.kaikkipelaa.fi) sannadkii hal mar ka hor inta aanay ciyaaruhu bilaambin.
Puolen Pelin Takuu sääntö: Waxaa jira nidaam la yidhaa (PPT) oo dhaqan galay.
Intaan ka wada hadalka nidaamka ciyaarta la guda gelin, ayaa waalidka iyo ciyaartoyga lagula heshiinayaa
sidee baa ciyaartoyga loo hubinayaa ciyaartiisa, sida ciyaaraha waaweyn iyo sannadka oo dhan halka uu ka joogo kooxda. Marka ay kooxuhu ciyaartoy badan leeyihiin waxaa habboon in la kala qaybiyo ama la kala saaro si ay ciyaaraha uga wada qaybgalaan, isla markaana nidaamka PPT-gu u hir galo.Ciyaartoy kasta waa inuu garoonka galaa iskuna dayaariyaa inuu meel kasta ka ciyaari karo. Ciyaarta oo dhan waxay inta badan ku salaysan tahay sida laysugu afgarto ama lagu heshiiyo nidaamka wada hadalka ciyaarta. Nidaamkani wuxuu khuseeyaa ilaa 11 jirada.
Warqada ruqsada ciyaarta iyo caymiska
Ciyaartoy kasta oo ka qaybgeleya tartan ciyaarta kubada cagta ah waa khasab inuu lahaado ruqsada ciyaarta. Kooxda ayaa ka mas’uul ah caymiska khasabka ah inay diyaariso.
Ciyaartoyga aan lahayn ama haysan warqada ruqsada waxaa la eegayaa xaq ma u leeyahay in ciyaartoy loo aqoonsado.
Xafiiska weyn ee kubada cagta qaranka Finland waa in loo sheegaa inuu caymiska ciyaartoygu shaqeynayo.
Haddii aanu caymiska ciyaartoygu sax ahayn waxaa la eegaya xaq ma u leeyahay inuu ciyaaro.
Kooxda ama ciyaartoyga laftiisa ayaa la waydiin karaa ma haystaa warqadda ruqsada ciyaarta mase shaqaynaysaa.
Naadiga lagu qabto ama lagu helo in aannu sax ahayn ruqsada ciyaarta ee ciyaartoyga dembi ayaa lagu qaadayaa.
Ka raadso warqadda ruqsada ciyaarta internetka:
Qalabka looga baahan yahay ciyaartoyga (kuwa xidigta leh waa khasab)
Waxaad ka heleysaa kooxda
Adiga ayaa keensanaya
Shaadhka ciyaarta *
Sharaabaadka ama iskaalsaha ciyaarta
Kuwa gubka lagu xidho*
Gool hayaha shaadhkiisa
Gool hayaha surwaalkiisa
Gool hayaha gacmo gashigiisaa
Shaati gacmo dheer
Surwaal lugo dheer
Garan ama funaanad gacmo gaab
Dharka dabaysha ama dhaxanta
Surwaalka almentada ama tababarka
Jaaketka ama funnaanada almentada ama
Kabaha gudaha lagu ciyaaro
Caagada biyaha lagu qaato